0.5 10. Čikara Čadžoka
10. Čikara Čadžoka
Hostinger yakagovana chirongwa chekutangisa inotanga $ 0.80 / month chete – Yakakwana kune avo vari kutambira imwechete webhusaiti webhusaiti (shanyira Hostinger pamhepo).
Pane zvakawanda zvinofungidzirwa mu web dizains asi as sekutanga mazano angu ndekutora mwana danho.
Edza kubudisa chimwe chinhu uye kuitora pawebhu. Kunyatsogadzirisa uye kugadziridza kunogona kuuya mushure mokunge wadzidza unyanzvi hwako. Imwe nzira iri nyore yekugadzira webhusaiti ndeyokushandisa WYSIWYG tīmekļa redaktors, izmantojot Adobe Dreamweaver CC. Vatori vakadaro vanoshanda sezwi rinowanzoshandura izwi uye vanokubvumira kuti ugadzire nzvimbo yako yekuona pasina kutarisira zvakawanda zvekodhi.
Ja HTML neCSS Haisi Chinhu Chako, kana ir viena no jaunajām webhusaiti yega yega yekubvunzurudza kwako, saka zvichida dhizha-uye-drop vietņu veidotājs ndiro sarudzo yakanaka.
Mazhinji makambani ekubata webhu anopa huwandu hwekudonsa-uye-kudonha sosi anovaka mahara. Kana iwe usinei nebasa zvakanyanya nekutaridzika kana UX yenzvimbo, unogona kugadzira webhusaiti yako inoshanda muhafu neawa uchishandisa izvo zvemahara zvishandiso. Neimwe nzira, iwe unogona kuruka iyo webhu dhizaini nekushandisa yakabhadhara ese-mu-one muvaki webhusaiti senge Wix uye Weebly. Chinhu chakanakisa nezve izvi zvishandiso zvakabhadharwa zvakagadzirirwa vasina-techies. Ivo vanowanzo kuve nyore kushandisa uye vanouya nemazana emamwe pre-yakagadzirirwa matemplate. Iwe unogona kungotora pirmsdhizaini tēma uye woisa kune yako webhusaiti mune mashoma mashoma mashoma.
Heano mimwe mienzaniso yemawebhusaiti akavakwa neWix. Mēs atrodamies unogona zvakare kuda kutarisa kunze Wix yakavakirwa-editti matemplate pano.
Nzvimbo yega yega yakagadzirwa naWix: Natālija Latinsky.
Ndivanaani vatsva vateereri vako? Vadzidzi, vanogona sarnasgesa, vatengesi, nezvimwewo. Ivazīvs.
Vai es esmu vienīgais sei iyo ruzivo? Mifananidzo yemifananidzo, mafomu epepuru, mifananidzo, nezvimwewo. Uye kunyange zviri nani, taura nyaya.
Nguva dzose rangarira kuti kune ako ega mawebhusaiti, iwe uri rudzii. Ita shuwa iwe unotora izvi zvakakomba uye wotumira meseji inowirirana mubhakiti rako. Izvi zvinogona kutora fomu yeayo webhusaiti logo, makadhi ebhizinesi, kana chero chinhu chinoita sechinhu chakakosha se e-pasts yako siginecha.
Pane zvakawanda zvaunogona kusarudza kubva pakuvaka yako webhusaiti yemahara. Wix ine konts yemahara iyo inokutendera iwe kushandisa yavo kuva webhusaiti, apo 000Webhost inayo free web hosting zviripo.
Es atzinu webhusaiti yako pachako?
Wega mawebhusaiti haisiri chinhu chakakosha asi sezvo iri nzvimbo huru yekugovana zvakawanda nezvezvaunofarira uye zvaunofarira, paneļi wekuti ivo vatengesere ndikuitire imwe mari.
Kuva newebhusaiti yako pachako kunobatsira šeit kuwana basa?
Kuve uine-waitwa-wakanaka, hunyanzvi hwekudyira nhoroondo inozobatsira kuti ubve kunze kwevanokwikwidza kumaforamu ekutora vanhu Kunze kwerusununguko rwekunyatsogadzirisa, uri kuratidzawo kutanga uye hunyanzvi hwe HTML.
Es atzinu, ka kuisa yako kutangazve pane webhusaiti yako?
Sak, vai tu esi unofarira kuunganidzwa kwangu? Ndeupi airatidzika sekusika zvakanyanya kwauri? Es atzinu, ka chii chinonyanya kukosha mumasayiti emunhu?